ताजा, चम्किलो, पुरुष खुशबू, 2004 मा अधिक दस वर्ष को लागि लुभाना Homme, नयाँ संस्करणको रूपमा सिर्जना यसको लोकप्रियता गुमाएको छ र थप र थप नयाँ प्रशंसक र admirers प्राप्त छ। यो अत्तर सूत्र कल "यूनिसेक्स", पुरुष र महिला दुवै द्वारा पहना कि विचारणीय छ। यसलाई कुनै पनि विशेष स्वाद जस्तै यो चिनारी दिन्छ? मानवता को बलियो र कमजोर आधा यी लडाई - अझ गरम यसको लोकप्रियता र आजको perfumery बजार मा मांग - एक फैशन शौचालय, पानी परिभाषित गर्न प्रयास मा। खेल Homme लुभाना Chanel (समीक्षा यस्तो निष्कर्ष आउन अनुमति) - तपाईं खेल, तर पनि अत्यावश्यक विजय गर्न मात्र होइन प्रयास, स्टाइलिश, आधुनिक, आत्म-विश्वास मान्छे को छवि पूरक मदत गर्नेछ।
को स्वाद को इतिहास
10 भन्दा बढी वर्ष पहिले, 2004 मा, perfumer जाक Polzh यो आकर्षक गन्ध संरचना आविष्कार। यसको अग्रदूत लुभाना Homme हिट भएको थियो। पछिल्लो 1991 मा5वर्षअघि आए, र अझै पनि यसको लोकप्रियता पनि कायम रहन्छ। आकर्षणलाई Homme खेल Chanel समीक्षा यसको पूर्ववर्ती तुलनामा उज्यालो रूपमा वर्णन गरिएको र ताजा। यो पहिलो पुरुष खुशबू ब्रान्ड, स्पोर्टी रूपमा अवस्थित थियो। उहाँले संग्रामहरू जीतेको र उपलब्धिहरू को आत्माको शान संयोजन थियो।
बहुमुखी पक्ष डिजाइन - को खुशबू अवधारणा को दिल मा। यो एक मानिसको मुखर संग, अधिक ताजा र शारीरिक छ। यो नाङ्गो छाला मा ताजा हावा को अनुभूति संग तुलना गरिएको छ। अभियान छविमा प्रतिनिधित्व - एक नरम, प्राकृतिक seductiveness संग unbuttoned स्तन संग एक जवान। घर "Chanel" को स्वाद को निम्न परिभाषा दिइएको छ: "त्यहाँ केही छ कि वास्तविक कार्य भन्दा बढी शारीरिक छ।"
Andres Valenkoso 2004 मा अत्तर लुभाना घर खेल को अनुहार भयो। आफ्नो नाउ मा पानी को सतह मार्फत स्टाइलिश र सफल जवान कटौती: भिडियो प्रस्तुति निम्न कथा प्रस्तुत गरिएको थियो। उहाँले खुसी र मुक्त, नयाँ चुनौतीहरू र जीवनमा उपलब्धिहरू लागि खुला छ। उहाँले सेक्सी, विश्वस्त छ र एक सिकारी sensuality छ। मारविन Gaye - विज्ञापन को निर्देशक Bryus Veber, को संरचना गायक थियो।
अत्तर सरल र चम्केको कामुकता सम्बन्धित मानिसहरू नयाँ जोर ताजगी को दुनिया बनाउन मानिन्छ थियो। खुशबू क्लाउड शरीर captivating अपील envelops। छैन अचम्मको कुरा, विज्ञापन मानिसहरू र समुद्र मा संयुक्त तस्बिरहरू। त्यसैले यसलाई विशेषता र समीक्षा गरिएको छ। पुरुष लुभाना पोख्नुहोस् Homme खेल Chanel धातु, सफा, सिट्रस-समुद्री को आशय संग, ओजोन ताजा, छाला-चुरोट रूपमा वर्णन गरेर। महिला उहाँले पागल छ, र भावना आफ्नो टाउको गुमाउनु बनाउँछ भन्छन्।
बोतल डिजाइन रूपमा वर्णन गरिएको छ कि "Chanel" को J12 खेल ब्रान्ड लाइन पहिलो घण्टा आकार प्रेरित थियो "विलासी, पुष्ट, शान्त।" समयमा नयाँ खुशबू को एक सरल वर्ग बोतल classically सुरुचिपूर्ण देख्यो। लुभाना को एक बोतल पारदर्शी छँदा लुभाना खेल खैरो धातु चमक संग frosted ग्लास को थियो। ताजा र चिसो - उहाँले खुशबू को समग्र अवधारणा जोड थियो। खेल डिजाइन महत्तव रबर को कालो छाप रिङ घेरा धातु संग Lids बनाउने। यस दफ्ती पनि चिसो खैरो टन गठन। शब्द "खेल" embodies जो लुभाना Homme खेल (Chanel) बल, शक्ति र गति, जोड गर्न बोतल र प्याकेजिङ्ग मा रातो मा plotted। समीक्षा अक्सर, ", धातु स्वाद" को एक परिभाषा समावेश र सम्भवत, यो विशेषता प्याकेजिङ्ग डिजाइन कारण हो।
शारीरिक र गतिशील साथ captivating अत्तर aldehyde संयोजन, ताजा र मीठो टिप्पणीहरू। यो वुडी-मसालेदार aromas को एक समूह पर्छ। सदस्य समुद्र टिप्पणीहरू, पातलो सिमी द्वारा पूरक मा गर्नाले, सुन्तला महत्तव संग aldehyde गर्न धेरै बलियो सुरु याद गर्नुहोस्। यो प्रत्येक मानिस अत्तर राय र समीक्षा एक व्यापक दायरा किन यस्तो छ जो आफ्नो तरिका, मा खोल्दछ उल्लेख गर्नुपर्छ। विशेष प्रशंसक आदर्श विकल्प खोजी जारी निस्कने खडा त्यसैले Eau डे, अत्यन्तै लोकप्रिय छ। स्वाद र यसको ताजगी र मिठास कारण महिला "मा प्रयास" इन्कार नगर्नुहोस्। थप विवरण मा संरचना को घटक विचार गर्नुहोस्।
सिट्रस, सुन्तले रङ र सुन्तला को स्वाद संयोजन खुल्छ। तिनीहरूले aldehyde र समुद्री टिप्पणीहरू, पुरुष वर्गमा स्वामित्वको को अत्तर लागि जिम्मेवार छन् जो संग जोडिएको छन्। विश्वस्त र लगातार ताजगी को संग्रामहरू जीतेको र उपलब्धिहरू ध्यान, खेल भावना को एक विस्फोट दिन्छ। क्रिस्टल स्पष्ट aldehyde परिसर दिन भर बलियो ऊर्जा नाडी चार्ज समुद्री टिप्पणीहरू, जोड दिन्छ। आकर्षणलाई चैनल Homme ग्राहक को खेल "शक्तिशाली" मानिसहरू समय को परीक्षण र उच्च गुणवत्ता र स्थायित्व गर्न भरोसा धन्यवाद को एक उच्च सीमा संग खुशबू रूपमा परिभाषित गरिएको छ समीक्षाएँ। शीर्ष टिप्पणीहरू बारेमा एउटा आधा घण्टा, एक लामो समय राखिन्छ, र त्यसपछि sensuality र बलको वास्तविक सार प्रकट गर्छ।
मध्य टिप्पणीहरू neroli, मरिच र सेतो देवदार को संयोजन गरेर प्रतिनिधित्व छन्। अत्तर को मसालेदार र वुडी पक्ष यो चरण सबैभन्दा ठूलो खुलारूपमा मा प्राप्त भएको छ। प्रारम्भिक टिप्पणीहरू को गतिशीलता हृदय महत्तव को न्यानोपन र आकर्षण बदलिएको छ। यो छाला आफ्नो पछि खुलासा प्रक्रिया आउँदा चैनल लुभाना Homme खेल (EDT) को समीक्षा "बाक्लो र विविध" को रूपमा वर्णन गरे। केही कल यो चरण कस्मेटिक सुगंध संग केही समानता कारण "fondant"। यो बावजुद राम्रो सन्तुलित स्वाद, ताजगी र धृष्टता GenericName मसालेदार टिप्पणीहरू द्वारा सन्तुलित। सबै को सबै भन्दा राम्रो सुन्दर र वर्षाको मौसम मा प्रकट गरिएको छ।
अम्बर, वेनिला, tonka बीन, vetiver, सेतो musk र elemi को शारीरिक आधार टिप्पणीहरू विश्वसनीय नशीला निशान, सबै खेल चियरलिडरहरू गर्न अपील गर्नेछ जो प्रदान गर्नुहोस्। यो "पछिल्लो" सारा पिरामिड को आकर्षण र सेक्स अपील दिन्छ। चैनल लुभाना Homme खेल कोलोन समीक्षा एक उच्चारण पाश, दिन भर आयोजित जो संग खुशबू स्थायी रूपमा वर्णन गर्नुहोस्। यो जिम, कार्यालय, बैठक, आधिकारिक वा अनुकूल वातावरण लागि उपयुक्त छ। राम्रो जवान र वयस्क पुरुष "बसिरहेका" दुवै आफू र आफ्नो आकर्षण मा विश्वास गर्दै छन् जो। सुगंध आधुनिक शहर dweller को सक्रिय जीवनको ताल मा फिटिङ, एक विशेष करिश्मा छ।
चैनल लुभाना Homme खेल शौचालय, पानी र कोलोन को ढाँचामा प्रस्तुत, 150, 100 र 50 एमएल vials। फरक भएको संरचना मा स्वाद घटक को प्रतिशत निर्धारण गरिन्छ। को कोलोन लागि 2-6% छ, र शौचालय, पानी को लागि - 5-15%। फरक पनि धेरै खुशबू मा उपस्थित छ। कोलोन यो श्रृंखला 2007 मा जारी र सिट्रस-फर्न खुशबू पर्छ थियो। समीक्षा द्वारा उल्लेख रूपमा, थप "मीठो र सिट्रस" छ। बोतल यो एक आयताकार आकृति छ र कालो Chrome ढक्कन रिम संग complemented छ, बाक्लो गिलास बनेको छ।
हामी पनि यो श्रृंखला अर्को कोलोन उल्लेख गर्नुपर्छ। चैनल लुभाना Homme खेल चरम प्रतिक्रियाहरूले अत्तर को "हुर्केपछि" संस्करणको रूपमा परिभाषित। उहाँले एक मर्यादा छ र बलियो झुकाव, खातामा मामला अवस्था लिन आवश्यक छ। यसलाई इच्छित महत्तव प्रकट गर्न एक तरिका पत्ता लगाउन आवश्यक छ। केही यो undervalued विचार गर्नुहोस्। अत्तर जाक Polzh मरिच र हृदय आधार musk, देवदार, sandalwood र tonka सिमी थप्दा, माथिल्लो पुदिना अत्तर टिप्पणीहरू, सरू, ऋषि र सुन्तले रङ जोडिएको। उहाँले, को offseason मा राम्रो देखाउँछ एक स्थिर लामो रेल छ।
मानिसजातिको कमजोर आधा यो खुशबू को बल र ताजगी admires। आफ्नो पति, छोरा, सहकर्मी एक उपहार रूपमा आफ्नो खरीद। अत्तर plume aldehyde र सिट्रस महत्तव captivating, ध्यान ड्र। महिला विभिन्न पुरुष यो खुल्छ र नयाँ भेरिएसनहरूमा मा "सुने" भनेर उल्लेख गरे। यस मामला मा, यो विश्वव्यापी, लगभग सबै उमेर समूहका लागि केही साहसी र मोहक बावजुद मानिन्छ। बारेमा Chanel लुभाना Homme खेल (Eau डे) महिला प्रतिक्रियाहरू उहाँलाई स्थायित्व र आकर्षण मा शीर्ष चिह्न दिन्छ। उहाँले पहिलो टिप्पणीहरू देखि "टाउको बारी" गर्न सक्नुहुन्छ। केही महिला मुड आफ्नै तस्बिरहरू पूरक, एक यूनिसेक्स खुशबू रूपमा हेर्नुहोस्।
चैनल लुभाना Homme खेल: पुरुष समीक्षा
केही यसलाई "शक्तिशाली" कल, अरूलाई - "himoznym", तर केही यसको आकर्षक संरचना गर्न indifferent बाँकी छन्। प्रकाश, ताजा, सिट्रस, क्रूर, खेलकुद, आत्म-इरादों र लगातार: मानिसहरू स्वाद को निम्न परिभाषा दिन। कसैले यसलाई मीठो सिट्रस महत्तव देखि केटाहरू र विद्यालय-विद्यार्थीहरूको लागि मात्र उपयुक्त छ कि सोच्छ। तथापि, ड्रप-डाउन हृदय टिप्पणीहरू र आधार अधिमूल्यन, फलस्वरूप उच्च अंक सेट। मानिसहरू गरेको खुशबू थप ताजापन जोड गर्न बन्द-सिजन सिफारिस गरिएको छ र "मा मिठाई cloying tonka सेम डुबा छैन।"
आकर्षणलाई Homme खेल Chanel समीक्षा पछिल्लो दस वर्ष को लागि सबै भन्दा लोकप्रिय पुरुषहरु सुगंध को एक घोषणा गरेका थिए। यो बहुमुखी, बल, विश्वास र सक्रिय जीवन शैली मानिसहरू उहाँलाई एक विकल्प विश्राम बाकसगोलिचिन्ह, यसको आफ्नै चरित्र र करिश्मा छ, उज्ज्वल छ। एक समयमा, प्रयोगकर्ताहरूले सराहना को स्वाद मूल्यांकन। उहाँले "मानिसहरू छानेको" श्रेणी मा 2005 मा पुरस्कार अत्तर fifi पुरस्कार (इङ्गल्याण्ड) सम्मानित गरिएको थियो। त्यो आफ्नो नयाँ ग्राहकहरु गर्न धेरै, र अझै पनि थप ब्याज भन्छन्। सुगंध सिद्ध पूरक दैनिक, व्यापार र खेल पुरुष छवि छ।
आमा-मा-एक जन्मदिन लागि उपहार, उनको खुसी पार्न?
आमाबाबुले देखि उनको छोरा को 18 वर्ष को लागि उपहार
एक जवान दम्पतीले एक housewarming लागि के दिन? हामी सिक्न!
उपहार असामान्य, फेब्रुअरी 14, फेब्रुअरी 23 मा वार्षिकोत्सव आफ्नो जन्मदिन लागि मानिस,
उपयोगी गुण र ताप मरिच
सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु, विशेष गरी खाना पकाउन र सिफारिसहरू: चिकन संग काउली
विवरण, लाभ, फोटो: सन्तानको आउटलेट लागि प्लग। कसरी आफ्नो हात मा प्लग सकेट बनाउन
समुद्री मैनीक्योर। समुद्री शैलीमा मैनीक्योर
Eccentric टाई - सामेल भागहरु को सौंदर्य र विश्वसनीय विधि